De Gea ” Waxaan la kulmay dhibaato lamida tan heysata Pogba markii aan kusoo biirayay Horyaalkan” | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » De Gea ” Waxaan la kulmay dhibaato lamida tan heysata Pogba markii aan kusoo biirayay Horyaalkan”
De Gea ” Waxaan la kulmay dhibaato lamida tan heysata Pogba markii aan kusoo biirayay Horyaalkan”	Goolhayaha Manchester United David de Gea ayaa ku taageeray ciyaaryahanka khadka dhexe ee isku kooxda yihiin Paul Pogba inuu dib uga soo kabsado bandhigii liitay ee kulankii Liverpool.
Xiddiga reer France ayaa waxaa uu lakulmayay weeraro xoogan, kadib markii ay 1-1 la dhaafi waayeen Reds todobaadkii hore, isagoona sabab u noqday in laga dhaliyo kooxdiisa Gool rigoore ahaa kadib markii gacanta ku taabay kubadda isagoo xerada ganaaxa ku dhex jiray.
“markii la joogo dalkan, iyo dal kasta, waxaad samayn kartaa qaladaad. Waxaan nahay ibni’aadam. Waa caadi in goolhaye iyo ciyaaryahan ay sameeyaan qaladaad.” Ayuu yiri, mar la hadlayay Sky Sports.
De Gea, ayaa sheegay inuu ku dhibaatooday inuu la qabsado nolosha England, isagoona sanadii 2011, ka yimid kooxda Atletico Madrid, waxana uuna xusay in xiddiga adduunka ugu qaalisan ee Pogba uu u rajeynayo inuu kazoo kabsado xaalada xun ee uu ku jiro.
De Gea, oo kamid ah ciyaaryahanada kooxda Stoke City booqanaya Maqribki, ayaa doonaya inuu mar kale arko Jose Mourinho oo sii wata qaab ciyaareed xoog leh.
“Waxaan rabnaa inaan markale guul gaarno,” ayuu hadaalkiisa kusoo koobay goolhaye David De Gea.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/de-gea-waxaan-i-heysatay-dhibaato-lamida-tan-heysata-pogba-markii-aan-kusoo-biirayay-horyaalkan/">De Gea ” Waxaan la kulmay dhibaato lamida tan heysata Pogba markii aan kusoo biirayay Horyaalkan”</a>